Kobtii Dahabka uu u iibiyay Muslimiinta Gaza, Dhiigii iyo Dhuuxii uu…(Wuu isbadeli doonaa Fikirka aad ka qabto Ronaldo marka aad Aqriso SHEEKADAN) – Gool FM
Kobtii Dahabka uu u iibiyay Muslimiinta Gaza, Dhiigii iyo Dhuuxii uu…(Wuu isbadeli doonaa Fikirka aad ka qabto Ronaldo marka aad Aqriso SHEEKADAN)
Byare July 11, 2018
(Europe) 11 Luulyo 2018. Cristiano Ronado ayaa Sagaal Sano uu ku sugnaa Bernabeu kaddib ku biiray kooxda Juventus oo kula wareegtay adduun dhan 88 milyan oo bound.
Sidoo kale mushaar qaali ayuu usbuuciiba Ronaldo ka qaadan doonaa kooxda reer Talyaani , inkastoo la sheegay in u hadafkiisa ugu wayn aysan beeso ahayn balse uu doonayo meel laga jecel yahay.
Haddaba waxaan halkan kugu soo gudbineynaa 10 talaabo oo Bani,aadanimo uu Cristiano Ronaldo sameeyay taa oo badeli doonta Fikirka aad ka qabto wiilka reer Portugal.
1) Kobtii Dahabka ee Gool Dhalinta Yurub:
2011-dii Ronaldo waxaa la guddoonsiiyay Kobta Dahabka kaddib markii uu 40-gool dhaliyay, inkastoo ay labaad ku dhammeysteen horyaalka La Liga.
Halkii uu Ronaldo heysan lahaa Kobta wuxuu doortay inuu iibiyo, waxaana lagu iibiyo 1.2 milyan oo bound. Waxaana loogu deeqay Muslimiinta Gaza ee Falastiin.
2) Ballon d’Or kii 2013:
Ronaldo ayaa iibiyay Koobiga Ballon d’Or kii 2013 iyadoona loogu deeqay samafal ka dhacayay London.
Waxaa lagu iibiyay adduun dhan 530,000 oo bound iyadoona loogu deeqay hey,adda Make-A-Wish ee daryeesha caruurta qaba cudurada halista ah ee inta badan laga soo kicin.
3) Waa Safiir:
Ronaldo ayaa safiir ka ah saddax hey,adood oo waa wayn oo Samfalka ka shaqeeya, Save the Children, Unicef iyo World Vision.
Si joogta ah ayuuna had iyo jeer uga hadlaa in wax loo qabto caruurta iyo dadka dhibaateysan.
Sanadkii la soo dhaafay wuxuu fariin u diray caruurta lagu xasuuqayo dalka Suuriya, wuxuuna u sheegay inay yihiin Geesiyaal dhab ah isla markaana uu la jiro had iyo jeer.
Wuxuu sidoo kale si qarsoodi ah lacago ugu deeqay Save the Children oo uu waydiistay inaan la sheegin.
4) Lacagaha Gunnooyinka/Baraamiyada:
Ronaldo ayaa sidoo kale bixiyay lacago uu Gunno ahaan u helay taa oo ku aadan bandhigiisa wacan ee garoonka.
2013-kii waxaa lagu daray kooxda Sanadka ee Uefa isagoona ku helay lacago bareemiyo ah €100,000 oo euro oo u dhiganta (£89,000 oo bound), halkii uu qaadan lahaa beesada wuxuu ugu deeqay hey,adda Red Cross.
Sanad kaddib Ronaldo ayaa La Decima kula guuleystay Real Madrid koobkii Champions League ee Tobanaad.
Wuxuuna Bareemiyo ahaan u helay 450,00 oo bound, halkii uu jeebka ku shuban lahaa wuxuu ugu deeqay saddexda hey,adood uu Safiirka ka yahay ee Unicef, World Vision iyo Save the Children.
5) Dhiiga iyo Dhuuxa:
Ronaldo ayaa jirkiisa u diiday inuu ku sawiro Tattoo maadaama uu si joogta ah u bixiyo Dhiiga.
Dadka jirka ku sawirta Tattoo ka way bixin karaan dhiiga, laakiin looma ogola inay bixiyaan dhiiga isla marka ay Tattoo ga isku sawiraan si loo yareeyo khatarta Jeermiska.
Ma ahan oo kaliya inuu Ronaldo dhiig ku deeqo dadka u baahan oo wuxuu sidoo kale ugu deeqaa Dhuuxa.
Carlos Martins oo ku koox ahaan jiray Ronaldo ayaa Wiilkiisa u baahday Dhuux waxaana ugu deeqay Ronaldo.
6) 5-milyan oo bound oo Deeq ah:
Ronaldo ayaa lacago xoog badan oo lagu sheegay ilaa 5 milyan ugu deeqay dadyowga reer Nepalese kaddib dhul gariir ka dhacay bishii Abrii ee 2015.
Waxaa ku geeriyootay 9,000 oo ruux halka ay ku dhaawacmeen 22,000 kale.
7) Wuxuu caawiyay xarun lagu daweeyo Kansarka:
Ronaldo hooyadii Dolores Aveiro ayaa ka bad baaday Kansar kaga dhacay Naaska 2007, Ronaldo ayaana go,aansaday in xaruntaasi ku taala Portugal uu ugu deeqo adduun dhan £120,000.
8) Casuumaad uu u sameeyay Wiil Agoon ah:
Wiil yar oo taageera Ronaldo oo ku noolaa dalka Lubnaan oo lagu magacaabo Haidar ayaa Qarax ku waayay hooyadii iyo aabihii.
Wariye ku noolaa dalkaasi ayaa la xiriiray Real Madrid una gudbiyay sheekada iyagoona casuumay wiilka yar. Ooyin ayuu jabsaday Haidar markii uu arkay geesigiisa Ronaldo.
9) Sidii uu u caawiyay wiilkii yaraa ee qabay Kansarka:
Ronaldo ayaa 2009 lagu soo war galiyay qisada Nuhuzet Guillen oo ahaa wiil yar oo qaba Kansar halis ah.
Isaga iyo reerkiisa ayuu darawal u diray si loo keeno hotelka ay joogeen Real Madrid. Wuxuu wiilka yar u hibeeyay gool isagoona ku casuumay inuu ciyaarta ka daawado meesha uu ka leeyahay Bernabeu, ciyaarta kaddibna wuxuu siiyay maaliyadiisa.
Markii ay sii xumaatay xaalada Nuhuzet Guillen. Ronaldo ayaa loo soo bandhigay inuu bixiyo dhammaan lacagaha ku baxaya daweyntiisa oo ah boqolaal kun wuxuuna bixinayay in ka badan Sanad, balse nasiib darro Guillen ayaa markii dambe geeriyooday.
10) Sida uu u xanaaneeyay Walaalkiisa ka wayn:
Ronaldo aabihii Denis wuxuu ahaa mid caadeystay khamri cabista isagoona ugu dambeyn u geeriyooday 2005.
Walaalkii ka wayn ee Hugo Aveiro ayaa isna qaaday dhabihii aabihiisa isagoona qabatimay Khamriga iyo Daroogada.
Ronaldo ayaa go,aansaday inuu walaalkii ka bad baadiyo jidka xun uu ku socdo wuxuuna u balan qaaday inuu u hibeyn doono La Decima haddii uu iska joojiyo daroogada iyo khamriga.
Waxaana la arkayay Ronaldo iyo walaalkii oo dareen qalbi taabasho ah wadaagaya kaddib markii ay Real Madrid ku guuleysatay koobkii Tobonaad ee Champions League.
FIIRO GAAR AH: 16 dhacdo ayay ahayd sheekada Ronaldo balse waxaan u aragnay inay 10-kan ugu muhiimsan tahay.
"Mbappe waa sida Usain Bolt waana sharci darro waxa uu ka sameynayo Kubbada Cagta.".
RASMI: Kooxda Arsenal oo dhammaystirtay saxiixa Matteo Guendouzi – (Lambarkee loo xiray?) + SAWIRRO